Ndakaenda ku Indianapolis AMA kudya kwemasikati uko Joel Book akataura nezve Kushambadzira kune Simba reMumwe. Mharidzo yake yaive neruzivo rwakawanda rwakakomberedza kushandisa kushambadzira kwedhijitari kushandira vatengi zvinobudirira. Kunyangwe, paive nezvakawanda zvakatorwa kubva pachirongwa, paive neimwe yakanamatira kwandiri. Pfungwa yekuti: kushandira ndiko kutengesa kutsva. Chaizvoizvo, iyo pfungwa yekuti kubatsira mutengi inoshanda zvakanyanya pane kugara uchiedza kuzvitengesa.
Kana iwe usati wawedzera aya maemail sechikamu cheyako email yekushambadzira chirongwa, wadii? Vanogona kumisikidzwa kuti vatumire otomatiki zvinoenderana nemaitiro evatengi uye ivo vanoshandira vatengi vako zvinobudirira, pamwe nekuunza imwe mari kune yako yepasi mutsara. Inonzwika kunge slam dunk, handiti? Kana iwe uchida rubatsiro kuita aya marudzi emaemail muchirongwa chako chose cheemail, ndokumbira usvike kuna Delivra nhasi.
Kukadzi 17, 2014 na7: 00 PM
Kubatsira vatengi vedu kunogona kuve nyore kana kungave kuri kuita basa, zvichienderana nemaonero atinozviona. Ndakagara ndaona kuti kubatsira vatengi vangu bhizinesi rinobatsira kwazvo. kwete chete maererano nemari, asi maererano nehupfumi hwevanhu zvakare.
Uye mazuva ano, iine huwandu hwesimba rekuti zvakashata zvevatengi zvinoitika mune zvemagariro venhau, zvinonzwisisika kupfuura nakare kose kushandira vatengi vedu zvakanaka. Iwe hauzomboziva ndiani anoziva ndiani kana ndiani angave ari kumashure chiteshi kuti uwane mutsva mutengi.